मिल्दा पनि समस्या , छुट्दा पनि समस्या ; ओलीलाई छोडेका पुर्वएमालेका यी नेताहरुको के होला अबको तयारी ? – Sadhaiko Khabar
मिल्दा पनि समस्या , छुट्दा पनि समस्या ; ओलीलाई छोडेका पुर्वएमालेका यी नेताहरुको के होला अबको तयारी ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ समय: ९:२०:१४
कठमाडौं/ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाको एकीकरण बदर गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यूूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार अपराह्न बसेको सो पक्षका स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको उक्त निर्णय अनुुचित र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सो पक्षले सर्वोच्चको फैसला रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक फैसलाका रुपमा लिएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस अगाडि स्थायी कमिटी बैठकबाट बाहिरिदै गर्दा तत्कालीन एमाले एवम् प्रचण्ड–माधव समूहका नेता रघुजी पन्तले एकतालाई जोगाउन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र ओलीले फेरि पनि कुरा गरेर पहल थाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले बैठकमा एकतालाई जोगाएर जान सकिन्छ भने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए।
प्रचण्ड-माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक अगाडि तत्कालीन एमालेको माधव पक्षको मात्र बैठक बसेको थियो। उनीहरु एमालेमै रहेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्दै पुन: पार्टी एकताको लागि पहल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका थिए। छलफलमा सहभागी नेताहरुले एकतालाई जोगाएर जान सकिने सम्भावनाको खोजी गरेर अगाडि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए।
प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै रहने छ भने झलनाथ-माधव समूह एमालेभित्र ओलीसँग अन्तर्संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्‍त्र हैसियतमा छन्। १२० मध्ये चालिस जति सांसदहरू प्रचण्ड नेपालतिर थिए।
अब उनीहरु एमालेमै फर्केर संघर्ष थाल्‍ने बताएका छन्। नेता नेपालले एमाले निर्माणमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान भएकोले एमाले छोड्न नसक्‍ने र त्यही फर्केर निर्णायक लडाइ लड्ने बताएका छन्। माधव पक्ष फर्किने भएपछि ओली एमालेभित्रै पनि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ।
ओराली लागेको, हरिणको चाल भो।
बाचुन्जेल सम्मपनि मरेकै हाल भो।
छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले।
बासै उठाउने, कस्तो यो खेल भो?
जीवनमा धेरै-धेरै, धेरै नै झेल भो।
चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालको गित प्रचण्ड – माधव नेपाल समुहलाई लागु भएको छ । प्रचण्ड – नेपाल संगै हुँदा ओलीलाई भन्न केहि बाँकी राखेका छैनन् नेपाल र खनाल र यी समुहमा भएका अन्य नेताहरुले । अब उही पार्टीमा ओलीकै अन्डरमा बसेर पार्टीको नियम बमोजिम काम गर्नु पर्दा पक्कै नेपाललाई मरेकै हाल हुने अनुमान गरिएको छ । सामाजीक संजालमा ओली पक्षका केहि नेता कार्यकर्ताले त माधव, झलनाथ, भिम रावल, रघु पन्त, रामकुमारी झाक्रीलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य सम्म नरहने गरि निकाल्न सम्मको सुझाव दिएका छन् ।
अब आयोगले यी चारवटै दललाई पत्र लेखेर ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको जानकारी दिनेछ । पत्र पठाउँदा आयोगले तिवारी नेतृत्वको एमाले र किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई साविकका दुई दल ब्यूँतिएको भन्दै नयाँ नाममा दल दर्ता गर्न आउन आग्रह गर्नेछ ।
‘ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले एकीकरण भएर, अर्को नाममा पार्टी दर्ता गर्ने भनेछन् भने तिवारी र किराती नेतृत्वका दल कायम रहन सक्छन् । तर, किराँतीले र तिवारीले नै पाउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी हुन्न । जो कोहीले पुनः दर्ताका लागि दाबी गर्न सक्छन्’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘होइन, ओली र प्रचण्डले साविककै दलमा रहने भनेछन् भने सोही अनुसार हुन्छ ।’